Qaabka Carabka Loogu Raaxeeyo Siilka Iyo Kacsiga Ay Ka Qaadaan Dumarka - Hablaha Media Network
Qaabka Carabka Loogu Raaxeeyo Siilka Iyo Kacsiga Ay Ka Qaadaan Dumarka
HMN:- Dareemaha Jaceylka ayaa qalbiga haweenka ku bilaaba in uu ku ciyaaro iyadoo rabitaankaasi xoogan oo ku aadan in ay helaan qiso jaceyl oo ay ku noolaadaan ayay gabartu raadineysaa qof ay weydaarsato jaceylkaasi ay rajeyneyso .
Marka la fiiriyo jaceylkaas waa mid si weyn uga duwan jaceylka dhabta ah ee waara , mana yaqaanaan haweenka jaceylka bilaawga uu ku yahay sirta jaceylka hadaba Allsiyaasad.com ayaa ku siineysa wax yaabaha muhiimka ee ay gabartu ka aqoon jaceylka .
1- Jaceylka Waa Mas`uuliyad : gabadha ayaa marka ay ku jirto bilaawga jaceylka u haysata in jaceylka yahay hub ay kula dagaalamayso qofkii cariiriya xorayadeeda una haysta in weli ay yar tahay , balse gabdhaha jaceylka ku cusub waxa aysan garaneyn ayaa ah in jaceylka yahay mas`uuliyad ,ogoow jaceylka waa qadarin , sameynta jaceyl dhab ah waxaa u sal ah kalsooni iyo is fahan .
2- Jaceylka Waa Joogteyn : Jaceylka waa hishiis laba qof ku balamayaan in ay fuliyaan dhamaan sharciyadiisa tanina gabdhaha jaceylka ku cusub ayaan garaneyn una haysta kaliya in uu yahay is weydaarsi erayada jilicsan balse waa mas`uuliyad intaas ka weyn .
3- Jaceylka Waa Ixtiraam : Jaceyl aan laheyn ixtiraam waa geed aan miro laheyn , waana muhiim in gabarta jaceyl cusubka ah ogaato , ogoow sida aad dooneyso in laguu ixtiraamo in adna lagaaga baahan yahay
4- Jaceylka Waa Naf Hurid : Ogoow jaceylka hadii uusan laheyn isu tanaasulid in uusan guuleysaneyn waligiis.